Apple Inoburitsa Yechitatu Beta yevagadziri veTVOS 11.1 uye watchOS 4.1 | Ndinobva mac
Semazuva ese, kana michina ye beta yatanga, Apple inotora mukana uye kuvhura mabheta ezvese zvishandiso uye nezuro hazvigone kusarudzika. Nezuro masikati Apple yakaburitsa yechitatu beta yeIOS 11 pamwe neiyo zvakare tvOS 11.1 uye watchOS 4.1 yechitatu beta, uchisiya parutivi beta inoenderana ne macOS 13.1. Parizvino hatizive kuti nei Apple yakasiya vhezheni yeMac desktop inoshanda system, asi hachisi chinhu chinokwezva kutariswa kungave nekuti haisi nguva yekutanga kuti zviitike uye zvirokwazvo haizove ekupedzisira. .
Aya mabheji anosvika kune vanogadzira vhiki imwe mushure mekutanga kwechipiri beta yeese Apple mashandiro ekushandisa masisitimu. Iyo inovaka yeakakodzera betas anotevera:
Semumabhatas apfuura, zvinoita sekunge hombe yekutanga yekuvandudza yeApple Watch neApple TV hazviunze nhau zhinji, zvirinani kubva pane zvatakaona mune matatu ekutanga mabheji. Iyo vhezheni inounza huwandu hukuru hwezvinhu zvitsva ichave iOS 11.1, vhezheni iyo inofanira pakupedzisira kubvumidza iyo kuwiriranisa mameseji kuburikidza neICloud neMac uye nezvimwe zvigadzirwa.
Uyewo ichatipa kudzoka kwe multitasking kuIOS kuburikidza neiyo 3D Kubata basa, chimiro chakanyangarika mubeta rekutanga reIOS 11 pasina chikonzero chiri pachena asi chichavepo zvakare pachikumbiro chakakurumbira. Ndinovimba, hazvizotora nguva kuti vakomana veCupertino vatange beta inoenderana yeTVOS 11.1 yevashandisi veruzhinji beta, pamwe nhasi panguva yemasikati nguva yeSpanish.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inotangisa yechitatu beta yeTVOS 11.1 uye watchOS 4.1 vanogadzira
John blay akadaro
Mazuva maviri apfuura. Shamwari mucomputer science mazuva maviri anonoka kare.
Pindura kuna Juan blay
Microsoft Outlook yemac inoburitsa "yakareruka" kugadzirisazve, yakafanana neiyo iOS application